कसरी दार्जीलिङ र कालेबुङ रेड जोनमा? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारकसरी दार्जीलिङ र कालेबुङ रेड जोनमा?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, ‘जुन जिल्लामा संक्रमण तीब्र छ र नयाँ संक्रमितहरू भर्ना भइरहेका छन्, त्यस जिल्लालाई रेड जोनमा राखिएको छ। 21 दिनदेखि कुनै संक्रमितको मामिला छैन, त्यसलाई ग्रीन र 14 दिनदेखि कुनै संक्रमण छैन, त्यसलाई अरेञ्ज जोनमा राखिएको छ।’ नयाँ नियमअनुसार कालेबुङ र दार्जीलिङलाई रेड जोनमा राखिएको छ। यसको अर्थ हो कालेबुङ र दार्जीलिङमा संक्रमणको संख्या तीब्र छ र निरन्तर संक्रमितहरू अस्पतालमा भर्ना भइरहेका छन्। के साँच्चै दार्जीलिङ र कालेबुङमा संक्रमण तीब्र छ र यहाँ रेड जोन हुने किसिमका संक्रमितहरू अस्पताल भर्ना भइरहेका छन्? यसबारे जिटिए र बङ्गाल सरकारको स्पष्ट बयान कतै आइरहेको छैन।
कालेबुङ, 1 मई
केन्द्र सरकारले कोविड-19 सित लड्न आफ्नो रणनीतिमा निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको छ। राज्यका हरेक जिल्लाका तत्कालीन स्थितिअनुसार रणनीति तय गरिएको छ। केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले3मईदेखि उताका लागि जिल्लालाई अलगअलग जिल्लामा बाँडेको छ। नयाँ रणनीतिअनुसार जिल्लालाई रेड, ग्रीन र अरेन्ज जोनमा बाँडिएको छ। कालेबुङ र दार्जीलिङ नयाँ सूचीअनुसार रेड जोनमा परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको संख्या, डबलिङ रेट र टेस्टिङको हिसाबमा जिल्लाहरूको नयाँ सूची तयार गरेको बताएको छ। जसमा कुन जिल्ला कुन जोनमा छ र त्यहाँ कस्तो पहल गरिनेछ, त्यसबारे जनाइएको छ।
3 मईदेखि उताका रणनीतिअनुसार 130 वटा जिल्लालाई रेड जोनमा छुट्याइएको छ भने 284 जिल्ला ओरेञ्ज अनि 319 जिल्लालाई ग्रीन जोन बनाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालले अहिले दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेङ्गलुरु, अहमदाबादलाई रेड जोनमा नै राखेको छ। यसबाहेक महाराष्ट्रका 14, दिल्लीका 11, तमिलनाडुका 12, उत्तर प्रदेशका 19, बङ्गालका 10, गुजरातका 9, मध्य प्रदेशका 9, राजस्थानका 8 जिल्ला रेड जोनमा पारेको छ।
बिहारका 20, उत्तर प्रदेशका 36, तमिलनाडुका 24, राजस्थानको 19, पञ्जाबका 15, मध्य प्रदेशका 19, महाराष्ट्रका 16 जिल्ला ओरेञ्ज र असमका 30, छत्तीसगढ़का 25, अरुणाचल प्रदेशका 25, मध्य प्रदेशका 24, ओडिसाका के 21, उत्तर प्रदेशका 20, उत्तराखण्डका 10 जिल्ला ग्रीन जोनमा छ।
हिजोसम्म कालेबुङ र दार्जिलिङ ग्रीन जोनमा थियो भने3मईदेखि उता कालेबुङ र दार्जीलिङलाई अचानक रेड जोनमा राखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, ‘जुन जिल्लामा संक्रमण तीब्र छ र नयाँ संक्रमितहरू भर्ना भइरहेका छन्, त्यस जिल्लालाई रेड जोनमा राखिएको छ। 21 दिनदेखि कुनै संक्रमितको मामिला छैन, त्यसलाई ग्रीन र 14 दिनदेखि कुनै संक्रमण छैन, त्यसलाई अरेञ्ज जोनमा राखिएको छ।’
नयाँ नियमअनुसार कालेबुङ र दार्जीलिङलाई रेड जोनमा राखिएको छ। यसको अर्थ हो कालेबुङ र दार्जीलिङमा संक्रमणको संख्या तीब्र छ र निरन्तर संक्रमितहरू अस्पतालमा भर्ना भइरहेका छन्। के साँच्चै दार्जीलिङ र कालेबुङमा संक्रमण तीब्र छ र यहाँ रेड जोन हुने किसिमका संक्रमितहरू अस्पताल भर्ना भइरहेका छन्? यसबारे जिटिए र बङ्गाल सरकारको स्पष्ट बयान कतै आइरहेको छैन।